အတိုင်ပင်ခံ အမှုကို အမိန့်ချဖို့ စစ်ကောင်စီ ဘာကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာလဲ
မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် အမိန့်ချဖို့ကို တရားရုံးက ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ် ။ ရွှေ့ဆိုင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုတော့ စစ်တပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အဖြေမပေးခဲ့ပါဘူး ။
ကိုဗစ် နိုင်တင်း ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အမှု့ကို အရင်ဆုံးချမှတ်နိုင်ပါတယ် ။ စွပ်စွဲချက်မှာ မနှစ်က မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်အတွင်း အိမ်အရှေ့ကဖြတ်လာတဲ့ စည်းရုံးရေးယာဉ်တန်းကို လက်ပြနုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်လို့ အကြောင်းပြထားပါတယ် ။
ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားခံထားရတဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နေပြည်တော် မြို့တော်ဝန် ဦးမျိုးအောင်တို့ကိုလည်း ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံထားရတာပါ ။ သို့ပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွပ်စွဲထားတဲ့ အမှု့တွေဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေမှာတော့ အာမခံချက် ရနိုင်တဲ့ အမှု့တွေပါလို့ ကျွမ်ူကျင်သူတွေက သုံးသပ်ထားပါတယ် ။
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးဌာနက အာရှရေးရာ ဌာနခွဲက လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ Phill Robertson ကတော့ ” စွပ်စွဲထားတဲ့ အမှု့တွေဟာ သိပ်ပြီး ကြီးကျယ်တာတွေ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဥပဒေအတိုင်းဆိုရင် လွှတ်ပေးရမှာပါ ။ သို့ပေမယ့် မြန်မာတရားရုံးတွေကို စစ်တပ်က ကြိုးကိုင်ထားတဲ့အတွက် အပြစ်ရှိတယ်လို့ အမိန့်ချနိုင်ပါတယ် ။ အတုအယောင် စွပ်စွဲမှု့တွေပါ ။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်မှု့ပါ ။ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး ”
” တရားမျှတတဲ့ တရားစီရင်မှု့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို မြန်မာစစ်ကောင်စီက မျက်ကွယ်ပြုထားပါတယ် ။ ရွေးကောက်ခံအစိုးရကို ချုပ်နှောင်ပြီး အများပြည်သူနဲ့ သတင်းသမားတွေ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတဲ့ ဒီတရားစီရင်မှု့ကို အသိအမှတ်မပြုပါဘူး ” လို့ ရောဘတ်ဆန်က ပြောလိုက်တာပါ ။
နေပြည်တော်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု့ကို ကြားနာနေစဉ်မှာ ပြည်တွင်းမှာလည်း လျှတ်တပြက် ဆန္ဒပြမှု့တွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ။ NUG အစိုးရဟာ နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်အပြုခံရဖို့အတွက် ကြိုးစားနေပါတယ် ။
NUG ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာဆာဆာက ” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်ဆေးနေတဲ့အမှု့ဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး ။ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်အုပ်စိုးနိုင်ဖို့ အားထုတ်မှု့ပါ ” လို့ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ် ။
ဆိုရရင် ……. အမေစုကို အမိန့်ချမယ့်နေ့မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ် ။ ဒါကိုကြည့်ရင် စစ်ကောင်စီဟာ အမေစုကို အမိန့်ချဖို့အတွက် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခံရမလဲ ဆိုတာကို ချီတုံချတုံနဲ့ ဂဏာမငြိမ်သလိုပါပဲ ။ ဒီအမှု့ကို လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကလည်း အသိအမှတ်မပြုနိုင်ဘူးလို့ အော်နေကြတာပါ ။
အမိန့်ရွှေ့လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ( ရာထူးမှားရင် ပြင်ပေးပါ ) သန်းလှိုင် နိုင်ငံတကာရဲအဖွဲ့ ( INTERPOL ). ညီလာခံကနေ ပြန်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့လည်း ပတ်သက်နိုင်ပါတယ် ။
တူရကီနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရဲအဖွဲ့ရဲ့ ညီလာခံမှာ မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ KIM JONG YANG က သီးသန့် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ။ ချစ်လွန်းလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှု့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ချိုးဖောက်နေတဲ့အကြောင်း ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး တရားခံ ဖမ်းဆီး လွှဲပြောင်းမှု့တွေအပါအဝင် များပြားလှတဲ့ ကတိကဝတ်တွေ ပေးခဲ့ရတယ်လို့ တူရကီသတင်းဌာနက ခန့်မှန်းထားပါတယ် ။
တူရကီနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြီးသွားတဲ့ နိုင်ငံတာကာရဲတပ်ဖွဲ့ ( INTERPOL ) အကြီးအကဲရာထူးကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက မဲပေးရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ။
နိုင်ငံတာကာရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲအဖြစ် တင်မြှောက်ခံရသူကတော့ ယူအေအီး (UAE ) နိုင်ငံသား Mr Ahmed Naser Al Raisi ပါ ။ အကြီးအကဲဟောင်း ကိုရီးယားနိုင်ငံသား Kim Jong Yang က တာဝန်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ ။ သန်းလှိုင်ကို ခေါ်တွေ့ခဲ့သူက ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပါ ၊ တရုတ်မဟုတ်ပါဘူး။
မစ္စတာအာမက်ရဲ့လက်အောက်မှာ ဌာနတွေ အများအပြားရှိနေသေးတဲ့အတွက် နေရာစုံအတွက် နိုင်ငံအသီးသီးကနေ ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ ။ တရုတ်နိုင်ငံသားကတော့ ကော်မတီဝင်အနေနဲ့ ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ …၊ မနေ့က ကြေငြာလိုက်တဲ့ အာဂျင်တီးနား တရားရုံးက မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှု့တွေကို အမှု့အဖြစ်နဲ့ လက်ခံလိုက်တာမို့ ဒီအခြေအနေအပေါ်မှာ တုန့်ဆိုင်းသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အမေစုကို ဘယ်လိုအမိန့်ချသည်ပဲဖြစ်ဖြစ် နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ အခြေအနေဟာ ပြည်တွင်းတော်လှန်အား ၊ ပြည်ပသံတမန်နည်းလမ်း ၊ ဥပဒေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ တဖြေးဖြေး ချောင်ပိတ်ခံထားရပြီမို့ စစ်ကောင်စီကတော့ ပြေးပေါက်မရှိတော့ပါဘူး ။
အလေးမရင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ကာယဗလအားကစားသမား မိုးဆွေ
အဝါရောင် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ရင်ခုန်ဖွယ် အလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အလှ ပုံရိပ်များ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရယ်ပြပြုံးပြတတ်လာပြီဖြစ်တဲ့ သားလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေကို ပရိတ်သတ်ကြီးအားပြသလာခဲ့တဲ့ အောန်ဆိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်ရုံတင်မကပဲ အမေရိကားမှာပါ အိမ်အကောင်းစားကြီးကိုပိုင်ဆိုင် ထားကြောင်း ပုံနဲ့တကွပြသလာခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
ငယ်စဉ်က ကိုယ်တိုင် ပညာမစုံလင်ခဲ့တာကြောင့် စာနာစိတ်နဲ့ နောက်မျိူးဆက်တွေ စာသင်ကြားနိုင်ရန် ကျောင်းဆောင်လေး လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီထက်ထက်မိုးဦး
မိဘမဲ့ ကလေးများအတွက် လိုအပ်တာများ လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ ပုံတွေကို ပြန်လည် မျှဝေလာခဲ့တဲ့ မေခလာ